Lisitry ny atiny tsy maintsy ananana REHETRA B2B REHETRA Mba hamahana ny dian'ny mpividy | Martech Zone
Mahalasa saina ahy fa ny B2B Marketers dia matetika hametraka fampielezan-kevitra marobe ary hamoaka onjam-peony na fanavaozana haino aman-jery sosialy tsy misy farafahakeliny fototra faran'izay tsara, vokarina tsara tranomboky atiny izay tadiavin'ny vinavina rehetra rehefa mikaroka momba ny mpiara-miasa aminy, vokatra, mpamatsy na serivisy manaraka izy ireo. Ny fototry ny atiny dia tokony hanome sakafo mivantana ny dian'ny mpividy. Raha tsy… ary manao izany ny mpifaninana aminao… dia tsy ho azonao atao ny mametraka ny orinasanao ho vahaolana mifanaraka amin'izany.
Vakio bebe kokoa momba ny sehatry ny dia an'ny mpividy B2B
Isaky ny mpanjifa B2B ampiako dia hitako foana ny fiatraikany amin'ny fahombiazan'ny varotra anatiny rehefa manome an-tsakany sy an-davany ireto singa manan-danja ireto izahay:
Famantarana ny olana
Ny Prospects dia te-hahatakatra tsara kokoa ny olana tadiavin'izy ireo vahaolana alohan'ny NA mitady vahaolana aza. Ny fametrahana ny tenanao ho fahefana iray izay mahatakatra tsara ny olana sy ny fiantraikany amin'ny mpanjifa dia fomba mahery iray hananganana fahatsiarovan-tena amin'ny marikao amin'ny dingana voalohany amin'ny B2B Buying Journey.
Farito ny olana - Omeo topy maso ifotony, fampitahana, kisary sns manampy amin'ny fanazavana ny fanamby amin'ny ankapobeny.
Mametraha sanda - Ampio hahatakatra ny vidin'ny an'io olana io amin'ny orinasany ary koa ny vidin'ny fanararaotana amin'ny orinasan'izy ireo raha vao voavaha ny olana.
Research - Misy loharanom-pikarohana ambaratonga faharoa izay nanoratra tanteraka an'ity olana ity ary manome statistika sy famaritana mahazatra momba ny olana? Ny fanampiana an'ity data ity sy ireto loharano ireto dia miantoka ny mpividy mety ho loharanom-pahalalana ianao. Ny fikarohana voalohany dia mahafinaritra ihany koa… zaraina matetika izy io ary afaka manangana fahatsiarovan-tena amin'ny marikao rehefa mieritreritra olana ny mpividy.
ohatra: Ny Digital Transformation dia ny dingana izay ahitan'ny orinasa ny vahaolana nomerika amin'ny lafiny rehetra amin'ny orinasany mba hahazoana ny tombotsoan'ny fironana dizitaly ary hijanona eo alohan'ny mpifaninana. Ao anatiny, misy tahiry amin'ny mandeha ho azy, fanatsarana ny angon-drakitra ho an'ny fandraisana fanapahan-kevitra tsara sy haingana kokoa, fahatakarana tsara ny mpanjifa, ahena ny fahasosoran'ny mpiasa ary fanatsarana ny tatitra mba hahafantarana ny fiantraikan'ny lafiny tsirairay amin'ny orinasa amin'ny fahasalaman'ny orinasa manontolo. Ety ivelany, misy ny fotoana ahafahana mitazona ny fihazonana, ny sandan'ny mpanjifa, ary ny varotra ankapobeny miaraka amin'ny fahafaha-mikaroka sy manatsara ny traikefan'ny mpanjifa amin'ny fomba vaovao sy vaovao. McKinsey dia nanolotra fanadihadiana amin'ny antsipiriany izay manondro fanao 21 tsara indrindra amin'ny fitarihana, fananganana fahaiza-manao, fanamafisana ny mpiasa, fampivoarana fitaovana ary fifandraisana izay mitondra fanovana nomerika mahomby.
Ny Prospect dia mety tsy hahalala ny vahaolana rehetra misy amin'izy ireo ary mety tsy hahatakatra tsara ny antony hanararaotana azy ireo amin'ny fampiasam-bola amin'ny sehatra ivelany na serivisy. Ny lisitr'ireo vahaolana mahitsy sy amin'ny antsipiriany dia manakiana mba hilazana ireo mpividy ho avy amin'ny fahatakarana tsara ny safidiny sy ny tombony, ny lafy ary ny fampiasam-bola ilaina ho an'ny tsirairay. Averina indray, ity dia mametraka anao eo am-piandohan'ny fanapahan-kevitra ary hanampy ilay fahatsinjovana hahatakatra fa azonao tsara ny safidy rehetra.
Ataovy-it-Tenanao - Ny fandinihana ny fomba ahafahan'ny mpanjifa manao ny asany manokana dia tsy manosika azy ireo hiala ny vahaolana misy anao, manome azy ireo sary mazava momba ny loharanom-pahalalana sy ny fetr'andro ilaina hanatanterahana ny asa manokana. Izy io dia afaka manampy azy ireo hamaky banga amin'ny talenta, fanantenana, teti-bola, fandaharam-potoana sns ... ary manampy azy ireo hanosika azy ireo mankany amin'ny vokatrao na serivisinao ho solony. Ampidiro ireo loharano azo antoka avy amin'ny antoko fahatelo izay afaka manampy azy ireo.
Products - Ireo teknolojia afaka manampy ny fikambanana sy mankasitraka ny vokatrao sy ny serivisinao dia tokony ho fenoina amin'ny antsipiriany amin'izao. Tsy mila manondro azy ireo amin'ny mpifaninana ianao, fa afaka miteny amin'ny ankapobeny amin'ny fomba anampian'ny vokatra tsirairay amin'ny fanitsiana ny olana nofaritanao tamin'ny atiny famaritana olana. Ny iray tanteraka eto dia ny tokony hamariparanao tsara ny mahatsara sy maharatsy ny vokatra tsirairay, ao anatin'izany ny anao. Izany dia hanampy ny fanantenanao amin'ny dingana manaraka, fananganana takiana.
Services - Tsy ampy ny milaza fa mahavita ny asa ianao. Ny fanomezana topy maso amin'ny antsipiriany momba ny fomba sy ny dingana omenao izay voasedra ara-potoana ary fenoina amin'ny antsipiriany dia ilaina.
Fanavahana - Fotoana mety hanararaotana ny orinasanao amin'ireo mpifaninana aminao io! Raha misy mpifaninana aminao manana fahasamihafana ilainao, dia fotoana mety hampihenana ny fiantraikan'izany tombony mety ananany izany.
Results - Manome tantara mpampiasa na fandinihana tranga iray hanehoana feno ny fizotrany sy ny taham-pahombiazan'ireo vahaolana ireo dia tena ilaina. Ny fikarohana ambaratonga voalohany sy faharoa momba ny tahan'ny fahombiazana, ny valiny andrasana ary ny famerenam-bola dia manampy eto.
ohatra: Matetika ny orinasa dia mametraka vahaolana miaraka amin'ny fanantenana hanovana nomerika, saingy ny fanovana dizitaly dia mitaky ezaka bebe kokoa ao anaty fikambanana. Ny fahaiza-mitarika dia tsy maintsy manana fahitana mazava momba ny fomba fiasan'ny orinasan'izy ireo sy ny fomba hahafahan'ny mpanjifany mifampiresaka raha vantany vao nahatratra ny fiovan'ny dizitaly ny orinasa.
Indrisy anefa, McKinsey manome tahirin-kevitra izay latsaky ny 30% amin'ireo orinasa rehetra no mahomby amin'ny fanovana ny orinasany nomerika. Ny orinasanao dia afaka mampiditra talenta manampy amin'ny fizotrany, manindrona consultant hanampy, na miantehitra amin'ireo sehatra novolavinao. Ny talenta fanindronana dia mitaky haavon'ny fahamatorana izay sahirana amin'ny ankamaroan'ny orinasa satria misy ny fanoherana voajanahary ny fanovana anatiny. Ireo mpanolotsaina izay manampy hatrany ny orinasa amin'ny fanovana nomerika azy dia mahatakatra tsara ny loza mety hitranga, ny fomba fananganana mividy, ny fomba hijerena ny ho avy, ny fomba hanentanana sy hananganana ny fahafaham-pon'ny mpiasa ary hanao laharam-pahamehana ny fanovana nomerika hahomby. Mahasoa indraindray ny sehatra, fa ny fahaizany sy ny fifantohany dia tsy mifanaraka matetika amin'ny indostria, ny mpiasa, na ny dingana matotra anao.
Tamin'ny traikefa an-taonany maro, ny Fanovàna dizitaly Ny fizotrany dia nohodiovina tamin'ny dingana tsy manam-paharoa hitarika ny fanovana nomerika anao - ao anatin'izany ny fahitana, paikady, fampandrosoana matihanina, fampiharana, fifindra-monina, fanatanterahana ary fanatsarana. Vao tsy ela akory izay izahay dia nanova fikambanana mpanao asa soa nasionaly, nifindra monina tanteraka ary nametraka vahaolana orinasa, namolavola ny mpiasan'izy ireo, ary afaka nandroso tamin'ny teti-bola sy mialoha ny fandaharam-potoana izy ireo, nahatsapa tanteraka ny fiverenan'izy ireo amin'ny fampiasam-bola.
Amin'ny maha orinasa kely azy dia ho laharam-pahamehana amin'ireo mpiara-miombon'antoka aminay foana ny orinasanao. Ireo mpitarika izay hihaonanao amin'ny tsingerin'ny varotra dia olona mitovy ihany no hitarika ny fanovanao nomerika mahomby.
Raha azonao atao ny manampy ny vinavinanao sy ny mpanjifa hanoratra ny zavatra takian'izy ireo dia afaka mahazo mialoha ny fifaninanana ianao amin'ny alàlan'ny fanasongadinana ireo tanjaka sy tombony fanampiny amin'ny fiaraha-miasa amin'ny orinasanao.
People - manome fahatakarana mazava momba ny talenta, traikefa ary / na fahaizana ilaina hanitsiana ny olana. Ankoatra ny izay ilaina, ampidiro ihany koa ny ezaka ilaina hamahana ny olana. Matetika ny orinasa dia tsy masiaka loatra amin'ny fikirakirana fampiharana, noho izany ny fametrahana ny andrasana amin'ny haavon'ny ezaka sy ny fomba ahafahan'ny vokatrao na serivisinao manalefaka fa ny fangatahana amin'ny fikambanana dia hanampy.
Plan - Mandehana amin'ny vinavinanao ny fizotranao izay namboarinao tamin'ny dingana vahaolana hahazoana antoka fa afaka mamina-pandrika ny fizotry ny fotoana miaraka amin'ireo loharanon-karena olombelona sy teknolojia ilaina izy ireo. Ampio izy ireo hanao laharam-pahamehana ny fampiharana mba hahatratrarana ny fiverenana lehibe indrindra amin'ny fampanjariam-bola aloha ary mandroso amin'ny tanjona lavitra amin'ny fanitsiana ny olana.
Risk - Fifanarahana momba ny serivisy, ny fanarahan-dalàna, ny fahazoan-dàlana, ny fiarovana, ny famerenam-bola, ny drafitra miverimberina… matetika ny orinasa dia manangana fepetra takiana manokana amin'ny olana fa ny famahana ny olana izay mety hanakana ny ezaka ataon'izy ireo amin'ny fampiharana vahaolana.
Fanavahana - Raha manana tombony azo oharina amin'ny mpifaninana aminao ianao, dia tokony hampidirina ao anatin'ireto fepetra takiana io mba ho laharam-pahamehan'ny fanantenanao. Matetika ny orinasa dia very na mahazo fotoana iray miorina amin'ny olana iray.
ohatra: Download ny whitepaper sy ny lisitra feno momba ny fanovana ny orinasanao. Amin'izany izahay dia mamaritra faratampony ny loharanom-pahalalana ho an'ny olombelona, ​​ny drafitra miorina amin'ny ankapobeny, ary koa ny fomba hanalefahana ny mety tsy fahombiazan'ny fanovana nomerika anao.
Na aiza na aiza mitady vahaolana ny olona dia tsy maintsy eo ny orinasanao. Raha izany ny valin'ny fikarohana ho an'ny teny lakile manokana dia tsy maintsy laharana ianao. Raha izany no famoahana indostrialy dia tokony hanana fanatrehana ianao. Raha mikaroka sy mahita vahaolana amin'ny alàlan'ny influencer ny olona dia tokony hahalala ny fahaizanao izany. Ary… raha mikaroka ny lazanao an-tserasera ny olona, ​​dia tsy maintsy misy ny làlan'ny toro-hevitra, ny hevitra ary ny loharano izay manome ireo fahatsinjovana ireo fa ianao no safidy tsara indrindra ananany.
Authority - Manatrika ny haino aman-jery rehetra karama, karama, zaraina ary fananana ve ianao? Na fikarohana amin'ny YouTube io olana io, tatitra momba ny mpandalina momba ny indostriao, na doka mandeha amin'ny famoahana indostrialy… eo ve ianao?
fankatoavana - Fantatrao ve ny antoko fahatelo amin'ny fanamarinana, mari-pankasitrahana, lahatsoratra fitarihana eritreritra, sns. Ny fanekena ny indostria rehetra dia manome fahatokisana sy fahatokisana ireo mpividy mety rehefa manombatombana ireo mpamatsy.
laza - Moa ve ianao manara-maso mavitrika sy mamaly ny resaka sosialy, naoty ary ny fijerinao ireo vokatrao sy serivisinao an-tserasera? Raha tsy izany ianao sy ny mpifaninana aminao, dia hita fa tena mandray andraikitra kokoa ny fikambanan'izy ireo… na dia ratsy aza ny fanamarihana!
Personalization - Ny fandalinana tranga manokana sy ampahana fizarana fijoroana ho vavolombelona ary ny fijoroana ho vavolombelona ataon'ny mpanjifa dia tena ilaina amin'ny fifantenana mpamatsy. Ny mpividy B2B dia te-hatoky tena fa nanampy ny mpanjifa toa azy ireo ianao - miaraka amin'ireo fanamby mitovy aminy. Votoatiny lasibatra amin'ny personas manokana dia hanako miaraka amin'ilay mpividy mety hitranga.
Vakio bebe kokoa momba ny fifandraisan'ny personas amin'ny fitsangatsanganana sy ny fantsona fivarotana
Tsy misy ohatra aseho eto… ity dia fanaraha-maso feno momba ireo mpanelanelana sy fantsona hahazoana antoka fa voamarina ianao ho toy ny orinasa B2B mety hiara-miasa.
Fanamafisana ny vahaolana ary Famoronana marimaritra iraisana
Ny mpividy B2B dia matetika tarihin'ny komity. Ilaina ny manampy anao hampita ny antony maha-vokatra na serivisy mety anao mihoatra ny olona mikaroka ao anaty ekipa izay manapa-kevitra amin'ny farany hividy.
famahanana - Tsy manana teti-bola na fandaharam-potoana foana ny orinasa hampiasa vola avy hatrany amin'ny vokatrao sy serivisinao. Ary tsy te-hifandray amin'ny ekipa mpivarotra anao foana izy ireo amin'izay hisokafan'izy ireo amin'ny fangatahana. Manolotra whitepapers, downloads, mailaka, webinar, podcast, na fomba hafa hanohizan'ny fanantenanao nanohina ary voakitika nefa tsy amidy dia manakiana satria manohy mitarika ny diany mividy ny vina aman-jery.
Assistance - Tsy te hamidy ny orinasa fa mila fanampiana izy ireo. Mahatonga ny olona hamidy ve ny atiny, sa amin'ny loharano afaka manampy azy ireo? Ny endrinao, chatbots, click-to-call, fandaharam-potoana demo sns ... dia tokony hifantoka amin'ny fanomezana fanampiana sarobidy azy ireo… fa tsy fivarotana henjana. Ny orinasa manome fanampiana be indrindra amin'ny fanabeazana ny vinavina dia matetika ilay orinasa mandresy ny fotoana.
Solutions - Azonao atao manokana ve ny mampiseho fampisehoana vokatra izay miavaka amin'ny fikambanana tadiavinao hivarotra? Ny fandefasana ny interface na ny famahana vahaolana dia afaka manampy ny ekipa haka sary an-tsaina ny vahaolana entinao eo ambony latabatra. Mbola tsara kokoa aza, ny fanolorana andrana na tolotra fampidirana dia mety hanafaingana ny fananganana ny vokatrao na serivisinao.
Mametraha fiverenana amin'ny fampiasam-bola - Ny fanampiana ny vinavinanao hahalala ny sanda rehefa mamaritra ny olana, mandeha amin'izy ireo amin'ny vahaolana, ary amin'ny farany manome ny vokatrao na serivisinao ho vahaolana mifanaraka amin'izany dia mitaky ny hanampianao azy ireo hahatakatra ny fampiasam-bola sy ny fiverenany. Mety ho tafiditra ao anatin'izany ny fahafaha-mandrindra, ny vidiny ary ny mitanisa ny fomba amam-panaovan-tena an-tserasera.
Amin'io fotoana io, ny atiny dia tokony hamatotra azy rehetra ary ny mpividy ho avy dia tokony hahatakatra tsara raha mety aminy na tsia ny vahaolana. Matetika ny orinasa dia matahotra ny tsy hanomezana fahafaham-po izay antenaina rehetra amin'ny fanantenana ny mpivarotra hifoha handro amin'ny mpividy. Enta-mavesatra izany ary tokony hialana. Ny marikao dia hanangana fitokisana bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fanondroana ireo vinavinanao marina vahaolana fa tsy amin'ny fiezahana mivarotra ny vokatrao na serivisinao amin'ny rehetra!
Rehefa manampy ny mpividy toy izao ianao dia manamaivana ny elanelana misy eo amin'ny fitarihana (MQL) sy ny mpitarika mahay (SQL), manome ny ekipa mpivarotra anao hahazo ny marina mpividy manerana ny tsipika fahatongavana haingana.
Tags: fahefanab2batiny b2blisitry ny atiny b2bdia ny mpividytranga fanadihadianafamoronana marimaritra iraisanapaikady marketing amin'ny atinyfahasamihafanafamantarana ny olanafankatoavanalazafananganana takianametyfitrandrahana vahaolanafanamarinana vahaolanafifantenana mpamatsyfotsy fotsy